Raha mandà i Apple dia mamorona kinova manokana an'ny Windows 10 i Microsoft miaraka am-baravarana | Avy amin'ny mac aho
Niara-niasa tamina opera savony teo anelanelan'ny FBI sy Apple efa ho roa volana izahay. Nandritra izay roa volana izay, izay nanandraman'ny FBI ireo tao Cupertino hamaha ilay fitaovana nampiasain'ny fanafihana tao San Bernardino, dia betsaka no voalaza momba ny mety hisian'ny Apple dia afaka mamorona rafitra fiasa izay azo idirana amin'ny varavarana ambadika mba hahafahan'ny governemanta miditra amin'ny fotoana rehetra raha ilaina izany. Apple mandà tsy hamorona rafitra miasa, na finday na birao, miaraka am-baravarana ambadika mametraka ny fampahalalana tahirizin'ny mpampiasa azy ireo.
fa tsy ny mpanamboatra rehetra no manolo-tena hanome fiarovana ho an'ireo mpampiasa. Iray amin'ireo tranga manaitra indrindra hita ao amin'ny Microsoft. Nanaiky ireo tovolahy avy ao Redmond fa ny kinova voalohany navoakan'izy ireo tamin'ny Windows 10, dia nanangona tahirin-kevitra marobe mba hahafahana mikendry ny dokam-barotra amin'ireo serivisy samihafa atolotry ny bandy avy amin'ny Microsoft anay maimaimpoana. Google dia manao telovolana telo mitovy amin'izany, noho izany dia tsy gaga izahay ny raharaha Microsoft.
Araka ny TechInAsia, Microsoft noho ny fangatahan'ny governemanta sinoa dia namoaka kinova manokana antsoina hoe Zhuangongban ho an'ny afaka mifehy amin'ny fotoana rehetra ny hetsika rehetra ataon'ny olom-pirenen'ny firenena. Tsy vaovao ny fanaraha-maso ny Internet sy ny mpampiasa ataon'ny governemanta sinoa, koa tsy tokony hahagaga antsika ny toerana misy ny governemanta sinoa amin'io lafiny io. Soa ihany fa tsy mijaly ireo mpampiasa ny vokatra noforonin'i Apple ary tsy hijaly amin'ireto olana ara-piarovana sy fanelingelenana ny fiainantsika manokana ireto izahay, raha toa ka tsy terena hanova ny politikan'izy ireo amin'izany ny Cupertino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Raha mandà i Apple, Microsoft dia mamorona kinova manokana an'ny Windows 10 miaraka amina varavarana ambadika
TT tena faly aho mahita Apple TT indraindray
Zapa dia hoy izy:
Mino izany ianao, avy any Apple aho, fa na dia te hanao ny masaka aza izy ireo, mazava ho azy fa manana varavarana ambadika izy ireo, hadalana ny mino an'izay tsy misy dikany
Mamaly an'i Zapa